Miracle of Rebirth, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waxaan ku dhalanay inaan dib u dhalanno. Adiga iyo hamigeygu adiguba waa inaad la socotaan isbedelka ugu weyn ee nolosha lagu sameeyo - mid ruuxi ah. Ilaah waa na abuuray si aan ula wadaagno dabeecadiisa rabbaaniga ah. Axdiga Cusubi wuxuu ka hadlayaa dabeecadda rabbaaniga ah inuu yahay xalka ka takhalusida wasakhda dembiga aadamiga. Dhammaanteenna waxaan u baahan nahay isdaahirinta ruuxiga ah maxaa yeelay dembigu qof walba wuu ka daahirsanaaday. Dhamaanteen waxaan nahay isku sawiro isku mid ah oo qashin haystay qarniyo badan. Sida ay u qariyeen filim wasakh badan oo wasakh ah, hadhaaga dembiyadeena ayaa hoos u dhigay ulajeedkii asalka ahaa ee farshaxanka allaha awooda badan.
Soo celinta farshaxanka
Tusaalaynta leh rinjiga wasakhda ah waa inay na siisaa faham fiican oo ah sababta aan ugu baahanahay nadiifinta ruuxiga iyo dib u dhalashada. Waxaan leenahay kiis caan ah oo farshaxan dhaawac ah oo leh sawirada muuqaalka ah ee Michelangelo saqafka Sistine Chapel oo ku yaal magaalada Vatican ee Rome. Michelangelo (1475–1564) waxaa lagu bilaabay nashqadeynta farshaxanimada ee Masjidka Sistine Chapel sanadkii 1508 markii uu ahaa da'da 33. Muddo afar sano gudahood ah, wuxuu sameeyay sawirro badan oo leh masraxyo Kitaabka Quduuska ah saqafka dushiisa ku dhowaad 560 m2. Muuqaallo ka socda kitaabka Muuse ayaa laga heli karaa sawirrada saqafka sare. Motif caan ah ayaa loo yaqaan 'anlaropomorphic' oo ah Michelangelo Matalaada Eebbe (oo lagu sawiray aragtida muuqaalka ninka): cududdii u fidiyey ninkii ugu horreeyay, Aadan, gacanta iyo faraha Ilaah. Qarniyo badan, saqafka saqafka sare ayaa lahaan jiray (Waxaa loogu yeeraa fresco maxaa yeelay farshaxanku wuxuu ku sawiray malaas cusub) burburka ugu dambeyntiina waxaa ku daboolay lakab wasakh ah. Waqti kadib waa la burburi lahaa. Si taas looga hortago, Vatican-ka ayaa aaminay nadiifinta iyo soo celinta khubarada. Inta badan shaqada sawirada ayaa la dhammeeyay 80-meeyadii. Waqtigu markiisii ​​ayey astaantii ka soo noqotay masraxa. Carro iyo soot ayaa si xun u dhaawacay rinjiyeynta qarniyo badan. Xitaa qoyaanka - roobka ayaa soo galay saqafka dillaaca ee Sistine Chapel - ayaa qariqsiiyey isla markaana si adag u qaribay shaqada farshaxanka. Nasiib ahaan, si kastaba ha noqotee, laga yaabee dhibaatada ugu daran waxay ahayd isku day la sameeyay qarniyo badan si loo ilaaliyo sawirrada! Fresco-da waxaa lagu daboolay miiq faashad xayawaanka ah si ay u iftiimiso dusha sare ee mugdiga ah. Guusha muddada gaaban waxay isu rogtay in ay weynaato waxyaabaha gaagaaban ee la xallin doono. Burburka lakabyada kaladuwan ee varnish ayaa daruurisay saqafka saqafka saqafka oo xitaa sii muuqda. Xabagta ayaa sidoo kale sababtay dusha sare ee rinjiyeynta inay ruxdo oo diiriso. Cirku wuxuu u bakhtiyey meelaha qaarkood, taas oo walxaha midabku ay sidoo kale furmeen. Xeeldheerayaasha ayaa markaa lagu aaminay soo celinta sawirrada inay si taxaddar leh uga shaqeeyaan shaqadooda. Waxay ku isticmaaleen waxyaalaha mile jilicsan qaab jel. Iyo adoo si tartiib ah u saaraynaya jelka adoo isticmaalaya laf-dhabarka, utlorescence-ka madow ee dhalaalaya ayaa sidoo kale la baabi'iyey.
Waxay la mid ahayd mucjiso. Fresco daruuro leh oo mugdi ah ayaa mar kale soo noolaaday. Waxyaabihii uu soo saaray Michelangelo waa la qaboojiyey. Iyaga waxaa ka soo baxaya iftiin iyo nolol mar kale. Marka la barbar dhigo xaaladdii mugdiga ahayd ee hore, fresco nadiif ah waxay u muuqatay abuur cusub.
Eebbe ha u naxariistee
Dib u soo celinta rinjiga saqafka ee uu sameeyay Michelangelo waa tusaale ku habboon isdaahirinta ruuxiga ah ee dembiga bini'aadanka dembigiisa ilaahay, Eebbe abuuraha abuuray wuxuu noo abuuray shaqadiisa ugu qaalisan fanka. Bini aadamka waxaa loo abuuray muuqaalkiisa waana inay helaan Ruuxa Quduuska ah. Nasiibdarro, nijaasnimadiisa abuurkiisa oo ay sababtay dembigeenna dembiga ayaa qaatay daahirkan. Aadan iyo Xaawa way dembaabeen oo waxay heleen ruuxa adduunkan. Annaguba waxaan nahay ruux xagga ruuxa ah oo ku nijaasoobay wasakhda dembiga. Waa maxay sababta? Sababta oo ah dadka oo dhami waa dembi oo waxay ku noolaadaan wax ka gees ah doonista Ilaah.
Laakiin Aabbahayaga jannada ku jira ayaa inaga cusboonaysiin kara xagga ruuxa, nolosha Ciise Masiixna waxaa laga dheehan karaa iftiinka aan wada aragno. Su’aashu waxay tahay: dhab ahaan ma rabnaa inaan sameyno wuxuu Eebbe damacsan yahay inuu nagu sameeyo? Inta badan dadku ma rabaan tan. Waxay weli ku noolyihiin noloshooda ku wasakhaysan wasakhda xun ee dembiga gudcurka ku jiro. Rasuul Bawlos wuxuu ku tilmaamay mugdiga ruuxiga ah ee aduunkan warqaddiisa uu u diray Masiixiyiinta Efesos. Wuxuu ka sheekeeyey nolosheedii hore: “Adiguna waxaad ku dhimateen xadgudubyadiinnii iyo dembiyadiinnii aad ku noolaan jirteen nolosha Adduun. (Efesos 2,1: 2).
Waxaan sidoo kale u oggolaanay ciidankan musuqmaasuq inuu waxyeelleeyo dabiicaddayada. Iyo sidii ay fallaaraha murugsanaa ee Michelangelo u daboolay oo u burburay Russ, ayaa sidoo kale nafteennuba way madoobaatay. Taasi waa sababta ay aad ugu deg deg tahay in aan siino boos ku habboon dabeecadda Eebbe. Isagu wuu nagu maydhan karaa, wuu ka qaadi karaa cabirka dembiga oo wuu cusbooneysiiyaa oo iftiinka.
Axdiga Cusubi wuxuu sharxayaa sida aan ruux ahaan dib ugu abuurno. Waxay ku siineysaa dhowr tusaale oo ku habboon si ay mucjisadan u caddeyso. Sida ay lagama maarmaanka u ahayd in laga nadiifiyo cudurka 'Michelangelo' fresco wasakh ah, waa inaan ku maydhana ruux ahaan. Oo waa Ruuxa Quduuska ah oo tan samayn kara. Wuxuu inaga nadiifiyaa wasakhda dabiiciga ah ee dabiiciga ah.
Ama in lagu dhejiyo ereyada Bawlos, oo loogula hadlay Masiixiyiinta qarniyo badan: "Laakiin waa lay nadiifay, nadiif baa lagaa dhigay, oo waxaa laydinku caddeeyey magaca Rabbi Ciise Masiix" (1 Korintos 6,11). Nadiifinta waa ficil madax furasho ah waxaana Paul loogu yeeraa "dib u dhalasho iyo cusboonaysiinta Ruuxa Quduuska ah" ee Bawlos (Tiitos 3,5). Ka saaritaankan, nadiifinta ama ciribtirka dembiga sidoo kale wuxuu si fiican u matalayaa astaamaha gudniinta. Masiixiyiintu qalbigooda waa la guday. Waxaan dhihi karnaa Eebbe wuxuu ku badbaadiyaa nimcadiisa qalliinka si uu inaga xoreeyo kansarka dembiga. Kala sooca dembiga - gudniinta ruuxiga ah - waa sawirka cafiska dembiyadayada. Ciise ayaa tan suurta geliyay dhimashadiisa sidii kafaaraggud buuxa. Bawlos wuxuu qoray: "Isaguna wuu idinku dhex noolaaday, kii dhintay dembiyadiinna iyo buuryoqabnimadii jidhkiinna, oo dembiyadeenna oo dhanna wuu naga cafiyey" (Kolosay 2,13).
Axdiga Cusubi wuxuu adeegsanayaa sumadda iskutallaabta si loo muujiyo sida dembigeennii laga reebay dhammaan awooddii isagoo is dilay. Bawlos wuxuu qoray: "Waan ognahay in odaygeennii hore iskutallaabta lagula qodbay isaga iyo [Masiix], si jidhka dembiga loo burburiyo si aynaan mar dambe dembiga ugu adeegin" (Rooma 6,6). Markaynu Masiixa ku jirno, dembigu wuu nagu jiraa (i.e. nafteena dembiga ah) iskutallaabta lagu qodbo, ama dhinto. Dabcan, adduunku wuxuu wali isku dayayaa inuu nafteena ku daboosho dharka wasakhda ah ee dembiga. Laakiin Ruuxa Quduuska ahi wuu ina ilaaliyaa oo awood inoo siiyaa inaan iska caabinno soo jiidashada dembiga. Masiixa, kan ina buuxiya jiritaanka Eebbe ee ficillada Ruuxa Quduuska ah, waxaan ka xorreynay sarreynta dembiga.
Rasuul Bawlos wuxuu sharaxayaa ficilkan Ilaah isagoo adeegsanaya aaska aaska. Aaska aasaaska waxaa loola jeedaa sarakicid calaamad ah, oo hadda u taagan qofka cusub ee u dhashay "nin cusub" oo jooga meeshii dembiilaha "odaygii". Waa Masiixa kan noo fududeeyey nolosheena cusub, oo had iyo jeer ina siiya cafis oo siiya xoog noloshu ku siiyo. Axdiga Cusubi wuxuu isbarbar dhigayaa dhimashada nafteena hore iyo dib u soo nooleynteena iyo sarakicisteena astaanta ah nolol cusub iyo dib u dhalasho. Waxaan ku dhalannay xagga ruuxa xilligan beddeliddiisa. Waxaa ina dhashaa Ruuxa Quduuska ah oo dib loo soo nooleeyay.
Bawlos wuxuu dadka Masiixiyiinta ah ogeysiinayaa in "Ilaah, naxariistiisa weyn kadib, uu dib noogu soo nooleeyay rajo nool oo lagu soo sarakacay sarakiciddii Ciise Masiix kuwii dhintay" (1 Butros 1,3). Xusuusnow in falku yahay “dib u dhasheen” inuu ku qumman yahay. Tani waa muujinta xaqiiqda in isbedelkani uu dhacayo bilowga nolosheena Masiixiyiinta. Markaan beddelno, Ilaah baa na dhex deggan. Markaa taasna dib ayaa loo abuuri doonaa. Waa Ciise, Ruuxa Quduuska ah iyo Aabbaha inagu dhex jira (Yooxanaa 14,15-23). Markaynu - innaga oo ah dadka xagga ruuxa ah ee cusubi - dib u soo noqonno ama dib u dhalano, Ilaah baa gurigeenna u soo galaya. Haddii Ilaah Aabbuhu inaga dhex shaqeeyo, sidoo kale Wiil iyo Ruuxa Quduuska ah ayaa isku hal mar ah. Ilaah baa na dhiirrigeliya, oo inaga nadiifi dembiyada oo nagu beddela. Amarkan wanaagsanna waxaa naloo siiyay isbadal iyo dib u dhalasho.
Sida Masiixiyiintu ugu koraan iimaanka
Dabcan, Masiixiyiinta mar labaad dhashay waa - in lagu dhejiyo ereyada Butros - "sida carruurta hadda dhalatay". Waa inay noqdaan "diyaar u ah caqli badan, caano cod badan" oo quudiya si ay ugu koraan iimaanka (1 Butros 2,2). Butros wuxuu sharxayaa in Masiixiyiintu mar labaad dhasheen ay helayaan garasho iyo bisayl xagga ruuxa ah muddo kadib Waxay ku koraan "nimcada iyo aqoonta Rabbigeenna ah Badbaadiyeheenna Ciise Masiix" (2 Butros 3,18). Bawlos ma dhahayo in aqoonta ballaaran ee Baybalka ay naga dhigto Masiixiyiin wanaagsan. Waxayse tilmaamaysaa baahida loo qabo in la sii xoojiyo wacyigayaga ruuxiga ah si aan si run ah u fahmi karno waxa loola jeedo raacista Masiixa. "Aqoonta" macnaha kitaabiga ah waxaa ku jira hirgelintiisa wax ku oolka ah. Waxay la socotaa ku habboonaanta iyo garashada shaqsiga ee waxa innaga dhigaysa Masiixa. Koboca iimaanka Masiixiyiintu maaha in lagu fahmo dareenka abuuritaanka dabeecadda aadanaha. Mana aha natiijada korodhka ruuxiga ah ee Ruuxa Quduuska ah haddii aan Masiixa ku sii noolaano. Taas beddelkeeda, waxaan ku koray shaqooyinka Ruuxa Quduuska ah ee innaga dhexdeenna ku dhex jira. Dabeecada Eebbe waxay nooga timaaddaa nimco.
Waxaan ku helnaa qiil laba siyaabood. Dhinac, waxaan xaq uheena ama waaya aragnimada aayaha markaan helno Ruuxa Quduuska ah. Caddaalad oo laga helo aragtidan aragtidan waxay ka dhacdaa hal dhicitaan oo waxaa suurtagal ka ah kafaaraggudka Masiix. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale la kulannaa xaq qaadashada waqtiga uu Masiixu inagu dhex jiro oo uu inoogu diyaariyo cibaadada Ilaah iyo ka adeegida wasaaraddiisa. Nuxurka ama "dabeecadda" Eebbe ayaa mar hore naloogu deeqay markii Ciise na geeyo gurigeenna markii aan beddelanno. Waxaan helnaa xoojinta jiritaanka Ruuxa Quduuska ah markii aan toobadkeenno oo aan aaminsanaantaan ku helno Ciise Masiix. Isbadal ayaa ka dhacaya inta lagu gudajiro nolosheena Masiixiyiinta. Waxaan baranaa inaan si ka sii hooseeya nafsadeena u siinno iftiinka iyo xoojinta xoogga Ruuxa Quduuska ah ee isagu innaga dhaxlaya.
Markaynu dib ugaga soo dhalaalno xagga ruuxa, Masiixu wuxuu si buuxda noolashaqeeyaa isagoo inoogu jira Ruuxa Quduuska ah. Fadlan ka fikir waxa taasi micnaheedu yahay. Dadku waxay ku dareemi karaan isbadal iyadoo la adeegsanayo ficilkii Masiixa ee ku dhex noolaa Ruuxa Quduuska ah. Eebbe wuxuu la wadaagaa dabeecadiisa rabbaaniga ah aadanaha. Taasoo macnaheedu yahay Masiixi inuu noqday qof cusub.
«Haddii qof Masiixa ku jiro, waa abuur cusub; Bawlos wuxuu ku dhaafay 2 Korintos 5,17.
Ruuxa mar kale ku dhashay Masiixiyiintu waxay qaataan muuqaal cusub - kan ah Eebbe abuuray. Noloshaadu waa inay noqotaa muraayad ah xaqiiqadan ruuxiga ah ee dhabta ah. Taasi waa sababta uu Bawlos u awoodo inuu wax baro iyaga: "Ha isku hallayn naftaada dunidan, laakiin naftaada beddel adigoo maskaxdaada cusboonaysiiya ..." (Rooma 12,2). Si kastaba ha noqotee, waa inaanu ka fikirin inay taasi ka dhigan tahay Masiixiyiintu ma dembaabaan. Haa, waxaan isku beddelnay hal daqiiqad ilaa kan ku xigga taas oo ah dareenka ah inaan dib u dhashay markii aan helnay Ruuxa Quduuska ah. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah "odaygii" ayaa weli jira. Masiixiyiintu waxay sameeyaan qaladaad iyo dembi. Laakiin iyagu caadiyan ku dhexjiraan dembiga. Waa in si joogto ah loo cafiyaa oo looga maydho dembigooda. Cusboonaysiinta ruuxiga ah markaa waa in loo qaddariyo inay tahay socod joogto ah inta lagu gudajiro nolosha Masiixiyiinta.
Haddaynu ku nool nahay doonista Ilaah, waxay u badan tahay inaan raacno Masiixa. Waa inaan diyaar u nahay inaan ka cafiyo dambiga maalin walba oo aan u hogaansano doonista Eebbe ee tawbadkeenka. In kasta oo aan tan sameyneyno, Thanksgivingka dhiigga Masiix, Ilaah wuxuu had iyo jeer inaga nadiifiyaa dembiyadeena. Waxaan ku nadiifsan nahay nadiif ahaan dharka dhiig ee Masiix, oo u taagan kafaaraggudka. Nimcada Ilaah waxaan ku noolaan karnaa quduusnimada ruuxiga ah. Oo markaan tan ku sameysanno nolosheena, nolosha Masiixa waxay ka muuqataa iftiinka aan ka soo baxno.
Mucjiso farsamada ayaa beddeshay rinjiyeynta Michelangelo ee jilicsan iyo dhaawaca. Laakiin Ilaahay mucjisooyin yaab badan oo ruuxi ah ayaa innaga saaran. Waxay inbadan qabataa soo celinta heerka ruux ahaaneed ee caloosha ku jirta. Isaga ayuu ina abuuraa. Aadan wuu dembaabay, Masiixu wuu cafiyey. Baybalku wuxuu u aqoonsaday Aadan inuu yahay ninkii ugu horreeyay. Axdiga Cusubi wuxuu muujinayaa in nalagu siiyay nolosha isla sidii Aadam oo kale ah xagga dareenka ah inaan nahay dad dhiman oo bini-aadam ah siduu isagu dhulka ku yahay. (1 Korintos 15,45: 49).
Si kastaba ha noqotee, Bilowgii 1 wuxuu sheegayaa in Aadan iyo Xaawo loo abuuray aragtida Ilaah. Ogaanshaha in laguugu abuuray muuqaalka Ilaah wuxuu ka caawinayaa Masiixiyiintu inay fahmaan inay badbaadiyeen Ciise Masiix. Sidii asal ahaan loogu abuuray aragtida Ilaah, Aadan iyo Xaawo way dembaabeen oo waxay eedeeyeen dembiga dembiga. Dadkii hore ee la abuuray waxay dambi ka galeen dambiyad isla markaana natiijada waxay ahayd adduun ruux ahaan u nugul. Dembiguna wuu nijaasoobay oo wuu nijaasoobay dhammaanteen. Akhbaarta wanaagsan, si kastaba ha noqotee, waa in dhammaanteen la inaga cafiyi karo oo si ruuxi ah dib loogu noolaan karo.
Ilaah wuxuu inaga badbaadiyey shaqadiisii ​​madax furashada ahayd ee jidhka, Ciise Masiix, bixinta dembiga: dhimashada. Dhimashadii allabariga ee Ciise ayaa dib noola heshiisiisa aabaheena jannada ku jira isagoo madax furaya wuxuu Abuuray abuuraha iyo khalqigiisa abuuray dartiis. Wadaadka sare, Ciise Masiix wuxuu ina siiyaa xaqnimo xagga Ruuxa Quduuska ah ee dhaxalka ah. Kafaaraggudka Ciise wuxuu jabayaa xannibaadda dembiga oo jabiyey xiriirka ka dhexeeya aadanaha iyo Ilaah. Laakiin wixii intaas ka dambeeya, shaqada Masiixa ee ku jirta Ruuxa Quduuska ah ayaa ina mideysa Ilaah iyadoo naga dhigeysa mid isku waqti faraxsan. Bawlos wuxuu qoray: "Maxaa yeelay, haddii laydinla heshiiyey dhimashadii wiilkiisa markii aan weli cadowgan ahayn, intee in ka badan ayaa nolosheenna badbaadin doonnaa markii aan heshiis la galno hadda" (Rooma 5,10).
Rasuul Bawlos wuxuu isbarbar dhigayaa cawaaqibka dembiga Aadan iyo cafiya Masiixa. Bilowgii, Aadan iyo Xaawa waxay oggolaadeen in dembigu dunida yimaado. Waxay u dhaceen ballanqaadyo been ah. Oo sidaasay iyadu dunida u gashay iyadoo cawaaqibkeeda oo dhanna qaadatay. Bawlos wuxuu cadeeyay in ciqaabta Eebbe raacday dembigii Aadan. Duniduna waxay ku dhacday dembiga, dadka oo dhammuna way dembaabaan oo waxay ku dhacaan dabinka. Maahan in kuwa kale ay u dhinteen dembigii Aadan ama uu u gudbiyey dembiyadiisa farcankiisa. Dabcan, cawaaqibka “jidhka” ayaa durba saameyn ku leh jiilalka dambe. Aadan wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee mas'uul ka ah asalka deegaan uu dembigu si xor ah ugu faafo. Dembiga Aadan ayaa aasaas u ah ficil dheeraad ah oo aadanaha.
Sidoo kale, nolosha dembiga ah ee Ciise iyo dhimashadiisa raalli ahaanta ee dembiyada bini-aadamka waxay suuragal u noqotay in qof kastaaba ruux ahaan uu Ilaah la xiriiro oo dib ula midoobo. Bawlos wuxuu qoray, "Maxaa yeelay haddii dembigii Kan [Aadan] dembigiisa lagu xukumay mid keliya, intee in ka sii badan buu helayaa kuwa hela nimcada iyo hadiyadda caddaaladda iyagoo ku dhex xukumi doona midka keliya, Ciise Masiix » (Aayadda 17). Ilaah wuxuu kula heshiiyaa aadanaha dembiga leh isaga qudhiisa xagga Masiixa. Intaa ka dib, innaga oo Masiixu ku xoogaysiiyey Ruuxa Quduuska ah, waxaynu mar labaad ku dhashay Ruuxa ballankii Ilaah sida carruurta Ilaah.
Isaga oo tixraacaya sarakicidda kuwa xaqa ah, Ciise wuxuu yidhi in Ilaah "uusan ahayn ilaah kuwii dhintay laakiin uu kuwa nool yahay" (Mark 12,27). Si kastaba ha noqotee, dadkii uu ka hadlay may sii noolayn, laakiin way dhinteen, laakiin ilaahay awood u leeyahay inuu himilooyinkiisa gaadho, sarakicidda kuwii dhintay, Ciise Masiix ayaa iyaga kaga hadlay inay nool yihiin. Annagoo ah carruurta Ilaah, waxaan filan karnaa sarakicidda nolosha xagga soo laabashada Masiixa. Waxaa sidoo kale naloo siiyay nolosha hadda, nolol Masiixa ah. Rasuul Bawlos wuxuu nagu dhiirrigelinayaa: «... u malaynayaa inaad ku dhimateen dembiga oo aad ku nool tihiin cibaado ku dhex jira Ciise Masiix» (Rooma 6,11).